यस्तो छ कम्युनिष्ट पार्टीको फुट र एकता शृंखला
काठमाडौं, जेठ ३ । स्थापनाको ६९ वर्षपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको दुई मुलधार फेरि एक भएको छ ।
टुटफुटको अनेक धारमा विभक्त नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन अन्ततः लामो समयपछि एकताको मूल प्रवाहमा मिसिएको छ ।
संयोग पनि कस्तो भने सुरुमा ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको’ नाममा वि.सं. २००६ साल वैशाख १० गते भारतको कोलकातामा स्थापित भएको पार्टी अनेकौं गुट–उपगुटमा विभाजित हुँदै पुनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै बनेर उदाएको छ ।
२००६ साल वैशाख १० गते भारतको कोलकतामा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको लगभग सात दशकको इतिहास टुटफुट र एकताको लामो शृंखलाले भरिएको छ ।
२०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनपछि कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई लाइनको संर्घष भन्दै समूहगत विभाजनको शृंखला सुरु भयो । रायमाझी र पुष्पलाल समूह हुँदै कम्युनिष्ट पार्टी अनेकौं नाममा विभक्त भए ।
तेस्रो महाधिवेशनमा पुष्पलाल श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको समूहको विकसित पार्टी नै अहिले एमालेको धार हो । यो समूहले पनि कैयौं टुटफुटको शृंखला व्यहोरेको छ ।
पुष्पलाल समूहमा २०३० सालमा अर्काे विभाजन आयो । नेकपा (पुष्पलाल), मजदुर किसानसभा र नेपाल मजदुर किसान संगठन गरी तीन समूह बन्यो ।
पुष्पलाल समूहमा २०३३ सालमा फेरि पुष्पलाल समूह, मुक्ति मोर्चा र सर्वहारा क्रान्तिकारी संगठन नेपालका नाममा विभाजन आयो । यही समूहबाट २०२७ सालमा झापा जिल्ला कमिटीले विद्रोह गरी ‘झापा सशस्त्र विद्रोह’ गरेको थियो । त्यहीँबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीति गरेका थिए ।
०३२ सालमा कोअर्डिनेसन कमिटी (कोके) बनेको थियो । त्यही समूह २०३५ मा नेकपा (माले) बन्यो ।
त्यसमध्ये २०३६ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित नेकपा र सहाना प्रधानको पुष्पलाल समूहबीच २०४३ सालमा एकता भएपछि नेकपा (मार्क्सवादी) बन्यो ।
त्यसपछि २०४७ सालमा माले र मार्क्सवादीबीच पार्टी एकता भएपछि एमाले बनेको हो ।
अर्कोतर्फ पुष्पलाल समूहलाई आरोपित गर्दै अलग भएका मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य, निर्मल लामाहरुले नेतृत्व गरेको धारकै विकसित रुप हो, माओवादी केन्द्र ।
पुष्पलाल समूहसँग विभाजित भएपछि यो समूहलाई चौथो महाधिवेशनकारुपमा चिनिन्थ्यो । यसभित्र पनि २०३० सालयता विभाजनको अनगिन्ती शृंखला जोडिएका छन् ।
२०३० मा नेकपा (मशाल) र नेकपा (चौथो महाधिवेशन) कारुपमा विभाजन भयो । मोटो मशालबाट पनि लगत्तै मोहनविक्रम सिंह र मोहन वैद्यले अलग–अलग समूह बनाए । सिंहबाट फेरि बाबुराम भट्टराई, हरिबोल गजुरेललगायतले विद्रोह गरे ।
त्यसपछि २०४७ सालमा नेकपा (चौथो महाधिवेशन), नेकपा (मशाल), रुपलाल समूहको सर्वहारा श्रमिक संगठन र विद्रोही मसालबीच एकता भइ नेकपा एकता केन्द्र गठन भयो ।
सशस्त्र युद्धको तयारी गर्नेगरी गठन भएको उक्त पार्टी युद्धमा जाने/नजाने विषयमा पक्ष–विपक्ष भएपछि २०५१ सालमा विभाजन आयो ।
पुष्पकमल दाहाललगायतले नेकपा (माओवादी) र नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले एकता केन्द्रमै रहने गरी अलग पार्टी गठन गरे । पुष्पकमल दाहाल जनयुद्धमा होमिए ।
मोहनविक्रम र नारायणकाजीबीच २०५९ सालमा पार्टी एकता भयो र पार्टीको नाम नेकपा एकता केन्द्र मसाल रह्यो ।
२०५९ मा एकता गरेको मोहनविक्रमको नेकपा (मसाल) मा २०६० मा पुनः विभाजन आयो । उनले नेकपा (मसाल) र नारायणकाजी श्रेष्ठले एकता केन्द्र मसाल पार्टी नाम राखे ।
नेकपा माओवादी १० वर्षे जनयुद्धबाट २०६३ मंसिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति–सम्झौतासँगै शान्ति–प्रक्रियामा आएपछि एकता केन्द्र मसालले २०६५ सालमा माओवादीसँग पार्टी एकता गर्‍यो ।
२०६९ सालमा एकीकृत माओवादीमा पुनः विभाजन भएर मोहन वैद्य नेतृत्वमा अर्को पार्टी बन्यो भने २०७२ सालमा फेरि डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ पार्टी गठन गरे ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वमा माओवादी धारकै अर्को समूह पनि बन्यो । र, झन्डै दर्जन साना कम्युनिष्ट पार्टी अहिले पनि अस्तित्वमा छन् ।
यद्यपि, जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको दिन पारेर दुई भिन्न धारका ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै नाममा एकीकृत भएका छन् ।